OCD Bvunzo | Tsvaga Kana Iri OCD, Iyo Rudzi, Uye Kuomarara
About Brad, Muvambi Wedu
Yedu OCD Miedzo
OCD Kuomarara Bvunzo
Rudzi rweOCD Bvunzo
Zvese Nezve OCD
Tora iyo OCD bvunzo
Tsvaga kana iri OCD, iyo Type, uye Kuomarara
yehuwandu hwevanhu vari kugara neOCD
Mukana wemamwe mitezo yemhuri ane mamiriro ane nhoroondo yemhuri yemamiriro acho -
1 mu4 (25%)
75.8% mukana wekuve nehumwe kusagadzikana kusagadzikana, kusanganisira:
Kushushikana Kwemagariro / SAD
Kwakajairika Kuzvidya Mwoyo / GAD
Kuvhunduka / Kushushikana Kunorwisa
156,000,000 vanhu pasi rese
inobata marudzi ese, madzinza
inopararira zvakaenzana pakati pevarume nevakadzi
vanhu vakuru vari kutambura neOCD
vana vari kutambura neOCD
45,000 + vanhu
Kubva kumativi ese e
Semumwe munhu anorwara neOssessive-Compulsive Disorder kweanopfuura makore gumi, ishuviro yangu kuti ino webhusaiti inokutsigira iwe nekuwana tariro, kujekesa, uye kunzwisisa kwenzira yekumisa OCD Cycle.
Chii chinonzi obsessive compulsive kusagadzikana?
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) chirwere chekuzvidya mwoyo chinoumbwa nezvikamu zviviri: Kuona uye Kumanikidza. OCD chirwere chisingaperi, chemajini chinounza kushushikana kukuru kana chisina kuongororwa zvakanaka uye kurapwa. OCD inogona kukanganisa zvakanyanya munhu mupfungwa, pamoyo uye nemagariro.
Zviratidzo zveOCD zvinosanganisira obsessions, iyo inowanzo kuzivikanwa seisingadiwe epfungwa dzekusaziva dzinowanikwa sekudzokorora pfungwa, mifananidzo, kana zvishuwo zvisina kunaka uye zvinounza kushungurudzika uye kusagadzikana.
Mhando dzeOCD Bvunzo
Yedu OCD Subtype bvunzo ndiyo yakazara yakazara OCD yerudzi bvunzo pane internet. Chinangwa chedu chaive chekugadzira bvunzo yaizonyatsoratidza kuti ndedzipi mhando dzeOCD dziripo uye kusvika padanho ravari. Muedzo uyu unemibvunzo mina pamubvunzo wega wega, inokwana gumi nemashanu mibvunzo paiyi bvunzo diki.
Tora iyo OCD bvunzo:
OCD Test OCD Kuomarara Bvunzo Rudzi rweOCD Bvunzo
Kuongorora-kumanikidza kusagadzikana (OCD) Bvunzo & kuzviongorora
Yedu webhusaiti inopa akawanda OCD bvunzo sarudzo, kusanganisira iyo OCD Severity Bvunzo, OCD Inofungidzira Pfungwa Bvunzo, Mhando dzeOCD Bvunzo, uye Individual Subtypes eOCD Miedzo. Iyo OCD Severity Test yakagadzirirwa kuongorora kuomarara uye mhando yezviratidzo zveOCD mune varwere vane OCD. Usati watanga bvunzo, verenga zvinotevera tsananguro uye mienzaniso ye "Kucherekedza" uye "Kumanikidza." Tora Iyo OCD Yekusimba Kwayedza.
Pamusoro pezvo, isu tinopawo OCD Subtype Bvunzo, iyo inobatsira kuziva kuti ndeapi OCD iwe yaungatambura nayo. Bvunzo iyi ine makumi matatu nemasere subtypes eOCD. Tora Iyo OCD Mhando Bvunzo.
Kucherechedza kudzokorora, kusingadiwe, kufunga kwepfungwa, mifananidzo, kana zvishuwo zvisina kunaka uye zvinounza kushungurudzika uye kusagadzikana. Misoro yekutarisisa yevanhu vane OCD inogona kuuya nenzira dzakasiyana; utachiona, kurongeka, kuenzanisa, kutya kukuvadza, kufunga kwechisimba nemifananidzo, kutya bonde, chitendero uye hunhu. Muzviitiko zvese, idzi pfungwa dzinogadzira kutya kune mumwe munhu ane OCD nekuti zvinopesana nehunhu hwavo uye caste kusahadzika uye kusava nechokwadi muhupenyu hwavo.
Kuti ubvise kusagadzikana kunetseka kwekushushikana, kutya, kunyadziswa, uye / kana kunyangadza kubva kune Kucherekedza, chiito kana maitiro anoitwa kudzikisa kana kubvisa kushushikana. Izvi zvinonzi Kumanikidzwa. Kumanikidzwa, kana chero chiito chekudzivirira kana kudzikisira kushushikana kana mhosva, zvinogona kuuya nenzira dzakasiyana zvakare; kuchenesa, kuwacha, kutarisa, kuverenga, tiki, kana chero chiito chepfungwa chinodzokorora kana kutarisa mupfungwa kuti uone kana mumwe akaita kana achikwanisa kuita chero yeiyo Inotarisa pfungwa.
Yakawanda sei OCD uye OCD kutenderera?
Chidzidzo chakaitwa neWorld Health Organisation chakaratidza kuti OCD iri pakati pezvirwere gumi zvinotungamira, zvine hukama nehurema hwepfungwa. OCD rave rechina rakajairika chirwere chepfungwa uye yegumi inotungamira chikonzero chekuremara pasi rese. MuUnited States moga mune vanhu vanopfuura mamirioni matatu vanotambura neOCD (International OCD Foundation, 10).
Verenga zvakawanda nezve OCD tsananguro.
Iyo OCD kutenderera yakatenderera mune zvakasikwa, ichichinja kubva kune yekufungidzira kufunga (obsessions), zvichikonzera kutya, kusahadzika kana kushushikana, zvichikonzera kudikanwa kwechiito chekumanikidza kuti uwane zororo kubva mukutya uye kunetseka iko kuburitsa kunogadzira uko kunokonzeresa iko kwekutanga kushushikana. Dambudziko redenderedzwa rakagadzirwa nekuti kudzikiswa kwekusagadzikana uye kushushikana kubva pakuita iko kumanikidzwa ndekwenguva pfupi kudzamara kuve neruzivo zvakare.
Uye zvakare, kubvisa kushushikana kunongoshanda kusimbisa nekusimbisa iko kwekutanga kukoshesa. Naizvozvo, iko kwekutanga chiito kana hunhu hwakatanga kudzora kushushikana hunodzokororwa zvakare kuti uwedzere kubvisa kusagadzikana, uye unozoitwa tsika yekumanikidzwa. Nekudaro, kumanikidzwa kwega kwega kunosimbisa iyo obsession, iyo inotungamira mukuwedzera kumisikidza kwekumanikidza. Nekuda kweizvozvo, iyo yakaipa inotenderera yeOCD inotanga.
Zviratidzo zveOCD Mune Vakuru
Chii chinonzi OCD? Maererano neInternational OCD Foundation, OCD "chirwere chehutano hwepfungwa icho ...
Iko Kune Online OCD Bvunzo Yemwana Wangu?
Kucherekedza-kumanikidza kusagadzikana, kunowanzozivikanwa seOCD, kunokanganisa neuropsychiatric / ...
17 Zvinhu Zvaunoda Kuti Uzive Nezve OCD
Isu tese tine maitiro edu akasarudzika, kutenda mashura, kana tsika diki dzisingakuvadzi dzatinotakura ...
Kudzoreredza kunotanga pano, tora iyo OCD bvunzo
Ndichiri kubvunza kana iri OCD? Tsvaga nhasi.
Tora OCD Bvunzo
© 2021 ocdtest.com. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Ndokumbirawo upe iwo pazasi pazasi
Sevamwe vanotambura neOCD, ichi chivimbiso chedu KUSAZVIMWE spam. Chinangwa chedu chekuwana ruzivo urwu ndechekuenderera mberi kukupa iwe zviwanikwa zvekutsigira iwe kuti ubude kunze kweOCD kutenderera. Iwe unenge uine kugona kusarudza kubva pane izvi chero nguva.
Sarudza imwe yemakumi matatu nemasere eODC subtype bvunzo yekutora*
Sarudza imwe yemakumi matatu nemasere eODC subtype bvunzo yekutora1 - Kuongorora OCD Bvunzo2 - Kusvibisa OCD Bvunzo3 - Kuverenga OCD Bvunzo4 - Iripo / Philosophical OCD Bvunzo5 - Kudya / Kudzidzira OCD Bvunzo6 - Fortune Kuudza OCD Bvunzo7 - Kukuvadza OCD Bvunzo8 - Hutano OCD / Hypochondria Bvunzo9 - Hit uye Mhanya OCD Bvunzo10 - Ungochani OCD - HOCD Bvunzo11 - Incest OCD Bvunzo12 - Kufunga Kwakajeka OCD Bvunzo13 - Just Right / Anonzwa Right OCD Bvunzo14 - Magical Kufunga OCD Bvunzo15 - Kwepfungwa / Kushushikana Kwepfungwa OCD Bvunzo16 - Pfungwa Kuverenga OCD Bvunzo17 - Tsika OCD Bvunzo18 - Inoda Kuziva OCD Bvunzo19 - Olfactory Referensi Syndrome Bvunzo20 - Paranoia OCD Bvunzo21 - Pedophilia OCD - pOCD Bvunzo22 - Kukwana OCD Bvunzo23 - Perinatal OCD Bvunzo24 - Postpartum OCD Bvunzo25 - Yakachena O / Yakachena Kutarisisa OCD Bvunzo26 - Hukama OCD - rOCD Bvunzo27 - Chitendero OCD / Scrupulosity Bvunzo28 - Basa reOCD Bvunzo29 - Kumutsidzira OCD Bvunzo30 - Schizophrenia / Kutya Kuenda Crazy OCD31 - Kuzvikuvadza / Kuzviuraya OCD Bvunzo32 - Zvepabonde zveOCD Bvunzo33 - Zvepabonde Ane Hasha OCD Bvunzo34 - Kunetseka Kwemagariro OCD Bvunzo35 - Somatic / Sensorimotor OCD Bvunzo36 - Kutenda mashura OCD Bvunzo37 - Symmetry / Kurongeka OCD Bvunzo38 - Mhirizhonga / Hasha Pfungwa OCD Bvunzo
Tora mhinduro dzako neemail